» तपाईँ महान् हुनुहुन्छ
२०७५ फाल्गुन २७,सोमबार २०:५०
हरेक व्यक्ति प्रतिभाशाली हुन्छ । यसकारण तपाईँ पनि प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ । जसरी हाम्रो वरपर रहेको हरेक वनस्पति आफैँमा उपयोगिताले भरपूर छ । वर्तमान आयुर्विज्ञानले स्पष्ट पारिसकेको छ कि हरेक वनस्पतिले उपचार गरिरहेको छ । हरेक वनस्पतिको महत्व मानिसले नै खोजेका छन् । जब हरेक वनस्पति आफ्नो ठाउँमा विशेष महत्व राख्दछ भने हरेक व्यक्ति आफैँमा विशेष छ, विशिष्ट छ र हरेक व्यक्ति आफैँमा महान् पनि हुन्छ ।
हरेक व्यक्ति आफैँमा महान् किन हुन्छ भने हरेक व्यक्ति विशिष्ट हुन्छ । विशिष्टता हुनु चाहिँ महानता हो । एकजना विद्वानले भनेका छन् । विशिष्टतालाई आफूले पनि पहिचान गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यो हो कि मानिसले आफैंले आफैलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । साधारण मानिस हरेकले आफूलाई चिन्दछ भन्छन् तर आफ्नै शरीरभित्र कुन कुन अङ्ग–प्रत्यङ्गहरु रहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् ।
आफ्नै शरीरभित्रका सबै रौँहरुको नाम त बताउन सजिलो छैन भने जसलाई हामी आन्तरिक क्षमता भन्दछौँ, लाई कसरी बाहिरबाट हेर्न वा बुझ्न सकिन्छ । हरेकले आफ्नो प्रतिभालाई चिन्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो प्रतिभा आफ्नै प्रयासले चिन्न पनि सकिन्छ वा अवसरले चिनाउन पनि सक्छ । अवसरको खोजी पनि गर्नुपर्दछ ।
अवसरलाई चिन्नु पनि पर्दछ । कतिपय अवस्थामा अवसरले आफैँलाई पनि खोज्दछ भन्दछन् । हाम्रो सामाजिक मान्यता यो पनि छ कि एकचोटि हरेकको समय आउँछ अर्थात् आफ्नो योग्यता र क्षमताको साथै दक्षताको परीक्षण र पहिचान गर्ने अवसर पनि हरेकको अगाडि आउँछ । यसलाई चिन्न सक्नुपर्दछ ।
अरुको जस्तै टाउकोको अगाडिपट्टिको भागमा निधार, आँखा, नाक, मुख, चिउँडो, गाला भए पनि तपार्इँको हरेक कुरो अरुभन्दा भिन्न छ । बोल्दा निस्कने आवाज अरुको भन्दा फरक छ । तपाईँको हिँडाइ सामान्यावस्थामा अरुको भन्दा अलग हुन्छ । तपाईँ अरुजस्तै केही खाँदा तपाईँलाई नपच्ने वा नरुच्ने हुन्छ । तपार्इँको सोचाइ वा चिन्तन अरुभन्दा पृथक छ । तपाईँ आफ्नो व्यवहार अरुभन्दा केही विशेष होओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।
तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि मलाई अरुले सम्मान गरोस् । तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि सम्मान पाउन सम्मानजनक काम गरिनु आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा तपाईँ आफूले आफैँलाई हेर्दा पनि आफ्नो नजरमा आफूलाई महान् बनाउनु हुन्छ ।
सबै मानिसमा व्यक्तिगत सुख र स्वास्थ्यको चाहना हुन्छ । आफू निरोगी रहन खोज्नु स्वार्थ हो वा होइन । विवाद र बहसको विषय हुन सक्छ तर आफू स्वस्थ्य रहेर अरुको लागि पनि केही वा कुनै काम गर्नुहुन्छ भने त्यो निकै राम्रो ।
माथि नै भनिएको छ – हरेकले आफूमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई चिन्न सक्नुपर्दछ । म कुन कुरामा विशेष छु र मेरो रुचिको क्षेत्र के हो ? आफ्नो रुचि र विशेषतालाई चिनेर त्यसै अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउने हो र आफूलाई नितान्त आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने जुनै क्षेत्रमा पनि प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । जहाँ पनि तपाईँको आवश्यकता छ । तपार्इँलाई हरेक ठाउँमा ठूलो सम्मान प्राप्त हुनेछ । तपाईँ नै आफ्नो ठाउँको सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुनेछ किनभने तपाईँ महान् हुनुहुन्छ ।
तपाईँ आफ्नो समाजलाई राम्ररी हेर्नुहोस् – मानिसले वा समाजले कसलाई सम्झेका छन् ? कसलाई गाली गरेका छन् ? कसलाई ताली दिएका छन् ? सबैमा गुणावगुण हुन्छ । गुणैगुणमात्र खोज्ने हाम्रो प्रकृति होइन, दोषैदोषमात्र कोहीमा पनि हुँदैन । गुणको मात्रा धेरै हुनु र अवगुणको मात्रा तुलनात्मकरुपले कम हुनु तथा गुणको निरन्तर विस्तार गर्दै जानुले तपाईँको परिचर्चाको विस्तार हुँदैजान्छ ।
मानिस धेरै स्वार्थी हुँदै गएको वर्तमान युगमा तपाईँले आफ्नो निस्वार्थतालाई आफ्नो घोडा बनाएर सडकमा निस्कनुहोस् । तपाईँको घोडालाई पनि स्वार्थी भन्न बेर नमान्ने पनि छन् । तपाईँको निस्वार्थतामा पनि दाग लागेको देख्न चाहनेहरु नभएका होइनन् । सबै तपार्इँलाई थाहा छ । तपाईँको यो बुझाइ पनि सही हो कि तपाईँले जतिसुकै राम्रो गरे पनि केहीले नराम्रो भनी कुरा काटिहाल्छन् तर यो पनि बुझ्नु भएको छ कि थोरै मानिस यस्ता पनि छन् जसले सत्यको चुरो देख्दछ । हो यस्तो दुनियाँले तपाईँलाई सलाम गर्नेछ किनभने तपाईँ महान् हुनुहुन्छ ।